Masinina mpanamboatra mason-tava masaka - Smart Tech Technology
Products Masinina Mask Masinina Welder Spot Welder
Masinina Welder Spot Welder
Ny lovantsofina amin'ny ampahany plastika amin'ny tonon-taolana, dia ny fampiasana paty fahaizana voajanahary, tsy misy fiatraikany amin'ny fisehoan'ny vokatra, ka miteraka vokatra amin'ny ambaratonga, fahombiazan'ny asa ambany ary solvents simika mahatonga ny fahalotoan'ny tontolo iainana, misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona. ny famolavolana sy ny fampiharana ny haitao ultrasonic welding dia namaha ny olana etsy ambony, mampihena ny fanjifana angovo, nahatonga ny fantsom-batana tsy misy fiovana, mafy orina, mora ampiasaina ary nitondra tombontsoa ara-toekarena sy sosialy ho an'ireo mpampiasa.
Ny welder ultrasonic dia ampiasaina amin'ny fametahana lamba tsy sarona, saron-tava ary kofehy vita amin'ny kodiarana amin'ny faran'ny roa.
Sokajy: Masinina Mask, Masinina sarona N95, Mamatotra masika fanaovan-tarehy tenifototra: Masinina Mask
Fampidirana milina ：
Ny hery miasa 220 ± 5V 50Hz-60Hz
hery manintona 1500w
Frequency output 20KHz
Miaraka amina voninkazo Araka ny fepetra takiana manokana
Mitady haingana Azo ovaina
Ny sakany mahomby Araka ny fepetra takiana manokana
Ambient temperature -10 ℃ -28 ℃
Haben'ny boaty hazo 1300mm (L) × 600mm (W) × 1200mm (H)
Masinina hafainganam-pandeha N95 hafainganam-pandeha manao masinina mandeha ho azy
Masinina fanaovana maska ​​tarehy fandidiana mandeha ho azy
Masinina fanaovana saron-tava Semi Automatic N95
Channel famonoana otrikaretina
Sterilizer amin'ny saron-tava
Masinina sarona N95
Mamatotra masika fanaovan-tarehy
Mifandraisa aminay anio, ary hanampy anao izahay hanomboka tetik'asa famokarana sarontava. Ny orinasanay dia afaka mamolavola sy mamatsy fitaovana isan-karazany miorina amin'ny filan'ny mpanjifa.
Zon'ny mpamorona © 2021 Smart Tech Technology Voatahiry rehetra
Ny orinasanao (takiana)